China Acoustic Panel fekitori uye Vagadziri | Huasheng
Acoustic Panels inogadzirwa kubva ku100% PET, nekupinza sindano kugadzirisa. Maitiro ekugadzira aya akazara epanyama & eco-inoshamwaridzika, hapana tsvina mvura, kubuda, marara, hapana zvinonamatira.Our polyester fiber Acoustic Panels vanobatsirwa nekuwanda kwezvakanakira, ivo vanotora kudzoreredzwa kurira, vachipa acoustic kutonga kudzora huwandu hwe ruzha mune ruzha. kamuri.
Yedu PET acoustic panera Asina-chepfu, asina-allergenic, asina kutsamwisa uye haana formaldehyde binders uye ane yakakwirira NRC: 0.85.100% polyester acoustic panera yakagadzirwa yakakwirira-tech inopisa kupisa uye inotumirwa neecocoon cotton chimiro.inogona svitsa iyo density diversity uye wobva waita chokwadi chekufema. Iyo ine zvakawanda zvakanakira, Kushongedza, Insulation, Flame kudzoreredza, Kudzivirirwa kwezvakatipinda, Mwenje uremu, Easy kuita, Yakagadzikana, Impact kuramba, Kugadziriswa kuri nyore.etc.
Iyo yakakodzera muhofisi, kamuri yemusangano, hofisi, KTV, nzvimbo yekuratidzira, nhandare, hotera ect. Nekuda kwekuti mikana yakawanda uye maficha, iyo inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzinonyanya kuve dzakasimba nekurira.
Polyester Fibre Acoustic Panel ipuranga yekushongedza substrate iyo inogona kuvezwa, kuumbwa, kutemwa uye kudhindwa.
Yakagadzirirwa kunyanya kushambadzira Interiors:
* sepinable inotsiva imwe yemaputi-yakafukidzwa mataira mumasisitimu ebasa
* Kupa inoreruka, inodurika uye inodzoreredzeka madziro emadziro nepasiyano rekuparadzanisa system
* acoustic panhare system
* chinogadzirisa chinotsiva matiles etsetse nezvinyoro zvepasi pasi.
Polyester Fibre Acoustic Panel ndiyo yakakodzera kuti ipe inobata uye inonzwa senge gadziriso dhizaini chero yemadziro mamiriro. Iyo inopa kwete chete inoyevedza yakanzwika sekupedza asi zvakare ine yakasimba acoustic kubatsira zvakare.
Polyester Fibre Acoustic Panel ingangoita chetatu kurema kweMDF kana plasterboard muhukuru hwakaenzana. Icho chigadzirwa chakapera kumeso, pini-inokwanisa, chinotsvedza uye chinogona kushandiswa seyakaipetwa kana imwe yakagadzikwa parutivi, ichipa iyo mabhenefiti akakodzera eakakodzera mumitsara-mutsara mutsetse masystem uye inoda shoma ruzhinji pakubata nehuremu hwayo.
1> Soundproof zvinhu polyester fiber acoustic panera ine yakakwirira density, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, moto kudzoserwa, hupamhi huwandu mutsindo kunyorovera, kushongedza kwakanaka, kutemwa kuri nyore uye kuiswa, hapana guruva kusvibiswa nezvimwe zvinhu zvakasiyana.
2> Mavara akasiyana siyana uye sarudzo dzekupedzisa dzinogona kugutsa zvese zvinodiwa nemutengi acoustic uye zvekushongedza zvinodiwa.
3> Chikamu chepamusoro-soro chekudzora moto chinogona kusvika B1 (GB) giredhi, uye yakanyanya kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza inogona kusvika E1 (GB) giredhi.
High Performance - Noise Kuderedza Kubata
Yakagadzirwa kubva 100% Yakagadziridzwa zvinhu
Kurema uremu, Anochinjika & Easily Customizable
Kuiswa Nyore & Kugadzirisa
Yakanyanya Kupokana Nekunyorova, Mafuta & Makemikari
Hazvibetseri kupararira kwemoto
Chengetedza nguva yese iyi - Inokonzera kusagumbuka kana chero zvinopesana
Teleconferencing uye Videoconferencing Rooms
Mahofisi Emakambani uye nezvimwe.
Yepfuura: Akanyorova chirimwa
Inotevera: Felt pouch (akanzwa magirazi kesi)